ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင်
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင်
1 ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 5th May 2009, 5:51 am
ဒီအောက် က proxy ကလေးတွေ ကနေပြီးတော့ ကျော်ကြည့်ကြပါဗျို့ ...
2 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 5th May 2009, 6:05 pm
ကျနော် လည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျို့
[You must be registered and logged in to see this link.] (ဒါကတော့ secure site တွေကိုမရပါဘူး)
3 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 21st May 2009, 10:24 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-05-21
တစ်ချို့ proxy ကျော်တဲ့ဆိုဒ်တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင် banned ခံရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။
4 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 22nd May 2009, 5:31 pm
5 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 23rd September 2009, 10:40 am
@[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
6 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 25th September 2009, 2:34 pm
proxy site ကနေကျော်ရ၊ ခွရတာ စိတ်မချရပါဘူးဗျာ။
အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ Browser ရဲ့ Network Setting မှာ 212.93.193.83: 443 ကိုပဲ ကျွန်တော်တော့သုံးတယ်ဗျာ။ လောလောဆယ်တော့ မြန်လည်းမြန်ပါတယ်။ အဆင်လည်းပြေနေပါတယ်။ .......... [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 25th September 2009, 3:16 pm
ဟိုးတစ်လောတုန်းက အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ freedom တို့ ultra surf
တို့တင်ထားရင် လိုက်ပြီး အစိုးရဘက်က ဆိုင်ရှင်တွေကို warning ပေးတယ်လေ။
သူတို့တွေမှာ ဆိုင်က peer to peer network တွေထဲထည့်တဲ့သူကထည့်နဲ့။ desktop တွေမှာ မတင်တော့ဘူးလေ။
ကျနော်တို့ ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် ISP မှာအကုန်ပေါ်ပါတယ်။အဲဒါကလည်း မှန်ပါတယ်။
သူတို့ဆီကနေပဲ လာရတာကို။ဒါပေမဲ့ သူတို့ကတော့
သူတို့မှာ တော်တော်လေးကိုအလုပ်ရှုပ်မှာပါ။ကျော်တဲ့ဆိုဒ်တွေရဲ့ proxy server
တွေနဲ့ contact လုပ်ရအုံးမယ်လေ။မဟုတ်ဘူးလား။
proxy ကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက proxy ပါ။သူ့အနေနဲ့ကတော့ google ခေါ်ရင်
ကုလားစာတွေနဲ့ မျက်စိနောက်မယ်။ဒါပေမယ့်သူကတော့ pron site တွေကိုကြည့်
မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဘာသာရေးနဲ့
8 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 27th September 2009, 11:23 am
9 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 27th September 2009, 11:24 am
proxybuilder ဆိုတာလေးကတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ .co.cc အကောင့်ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်မှာ ကျော်တာလေးကိုထည့်ထားလို့ရတယ်။ ဘယ်သူမှမပေးနဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းသုံး။တစ်သက်လုံးအဘန်းမခံရတော့ဘူးလေ။
အိုင်တီဒီဗလော့မန့် wrote: တစ်ခါတစ်လေ ကျော်ခွဆိုက်သုံးရတာ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ် .. သိတဲ့ ဆိုက်တွေကလဲ တစ်ချို့ ကလဲ ပိတ်ထားပြန် ၊ သိတာတွေကလဲ ကြော်ငြာများပြီးဖွင့်ရတာ အရမ်းလေး ၊ မေ့တာကမေ့ဆိုတော့ မိမိကိုယ်ပိုင် web proxy လေးတစ်ခုလုပ်ထားရင်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ..
ကြိုက်တဲ့အချိန် ၀င်ကြည့် ၊ ဘယ်သူမှလဲ သိဘူး .. ဘန်းလဲ မဘန်းဘူးပေါ့ .. speed ကလဲ ဂွတ်တယ် .. အဲဒါမျိုးမလိုချင်ဘူးလား .. လုပ်ချင်ရင်အရမ်းလွယ်ပါတယ် …
မှာ အလွယ်တကူပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ် .. နမူနာ ကြည့်ချင်ရင်တော့
သုံးတော့ မသုံးကျပါနဲ့ ..တော်ကြာ ကျနော့်ဘလော့ပါ ပိတ်ခံထိနေပါဦးမယ် .. ကိုယ်ပိုင်သာဖန်တီးကျပါ ..
လုပ်နည်းကလဲ လွယ်ပါတယ် .. http://www.proxybuilder.com/ ကိုသွားပြီး သူ့ ဆီကနေ PHPxory Script ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီး မိမိဆိုက်မှာ upload တင်လိုက်ယုံပါပဲ .. လုပ်နည်းကိုလဲ သူ့ script ထဲမှာ ရေးထားပေးပါတယ် ..တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့နော် .. မိမိကိုယ်ပိုင်ဆိုက်တော့ ရှိရမယ
10 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 27th September 2009, 12:03 pm
/-\_ tt@Ck3r ပြောသလိုပဲ ဆိုရင် အကို တော်တော်များများသုံးဖူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြောပြဦးနော်။
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခုခုကိုကျော်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ proxy ကိုပဲသုံးပါတယ်။ password နဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Ultra Surf ကိုပဲသုံးပါတယ်။ သူတို့ပေးထားတဲ့ Proxy Site တွေက ဘာတွေပါတယ်ဆိုတာကို မသိနိုင်လို့ပါ။ ကို /-\_ tt@Ck3r [b]ပြောသလိုပဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံရပါဆိုတာမှန်ပါတယ်။ အကိုပြောတာက မှန်ပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့မညီညွတ်လို့ ကြည့်ရရှုရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့တော့ Proxy Site သုံးခြင်းကိုတော့ အားမပေးစေချင်ပါဘူးဗျာ။
IP Address 212.93.193.83
Location SA SA, Saudi Arabia
City Riyadh, 10 -
ISP AL Faisaliah Internet Services & Technology
AS Number AS25233 Autonomus System number for Awalnet
Latitude 24°64'08" North
Longitude 46°77'28" East
Distance 2936.82 km (1824.86 miles)
11 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 27th September 2009, 12:10 pm
အဲ့ .. ဒါပေမဲ့ Proxy Site မှ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လည်းမျှဝေချင်ပါတယ်။ အကုန်လုံးတော့မစမ်းရသေးပါဘူး။ နောင်တော်တို့စမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စမ်းကြည့်ကြပါဗျာ။
1. proxify.com (26,627)
2. proxeasy.com (19,015)
3. hidemyass.com (18,181)
4. sslunblock.com (17,172)
5. proxy.tc (15,181)
6. secure-tunnel.com (13,416)
7. dtunnel.com (12,989)
8. hide-me-now.com (9,146)
9. blewpass.com (8,342)
10. totalnetprivacy.com (8,166)
11. freesslproxy.com (7,686)
12. proxyplace.net (7,417)
13. virtual-browser.com (7,342)
14. proxyboxonline.com (7,320)
15. imnotblocked.com (6,875)
16. schoolproxybypass.com (6,662)
17. unblockyoutube.com (6,450)
18. localbypass.com (6,423)
19. urpal.net (6,270)
20. localdomain.ws (6,118)
21. acmeserv.com (5,922)
22. free-proxy.nl (3,997)
23. penguinproxy.com (3,318)
24. accessum.net (3,088)
25. hidemyhead.us (3,077)
26. proxify.net (3,004)
27. aproxy.net (2,956)
28. livegeek.info (2,953)
29. zangoproxy.com (2,946)
30. proxrepublic.com (2,742)
jumboproxy.com/ ပါ။ သိပြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
12 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 27th September 2009, 4:49 pm
ဒီမှာရှိတဲ့လူများပေါ့ သိရင်ဖြေပေးကြပါဦးဗျာ ..
proxy address ကို ကိုယ့်နာမည် နဲ့  ဘယ်လိုလုပ်လဲဗျ .. အဲဒါလေးပါ
ဥပမာဗျာ .. Nayyine.net.mm .. 443 ပေါ့ ..
တစ်ယောက်သုံးတာတွေ့ ဖူးလို့ ပါ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
13 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 27th September 2009, 5:34 pm
70.85.16.16 80 က အဆင်ပြေပါတယ်
ပြန်လဲ မြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေး(လ်)မှာ သုံးလို့ မရဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ
။ ပြောပြပေးပါအုန်း ရှင်။
14 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 11th October 2009, 8:36 am
ကျော်လို့မရတော့ဘူး ကျော်လို့်ရမဲ့ proxy နဲ့ port လေးရှိရင် မျှကြပါအုံး
15 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 11th October 2009, 8:38 am
အဲဒီ ကျော်တဲဆိုဒ်တွေကို ပါဝင်လို့မရတော့ဘူးဗျ
16 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 12th October 2009, 12:34 pm
ကျွန်နော်က [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုဘဲသုံးတယ်..တော်တော်အဆင်ပြေတယ်..
17 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 12th October 2009, 4:32 pm
Last edited by N@Y Y!N3 on 5th November 2009, 6:32 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : လင့်တွင် ကုဒ်ခံခြင်း)
18 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင် on 5th November 2009, 2:58 pm
ကျနော် အခုအဆင်ပြေနေတာကတော့ 212.93.193.88(port-443)ပါ။ blog တွေဖတ်လို.ရပါတယ်။
19 Re: ကျော်တာ ခွတာ ၀ါသနာပါသူ .. site များပိတ်ထားလျှင် ကျော်နိုင်အောင်